Booliska Soomaaliya oo dhaawacay ardaydii galeysay imtixaanka | KEYDMEDIA ONLINE
Booliska Soomaaliya oo dhaawacay ardaydii galeysay imtixaanka
Arday ka mid ah kuwii galeyey imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ayaa maanta lagu dhaawacay iskuulka Macallin Jaamac ee degmada Xamar weyne.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan 3-arday oo ka mid ah ardaydii galeysay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ayaa ku dhaawacantay rasaas ay fureen ciidamada booliska ee ilaalinayey amniga imtixaanaadka.
Ardaydan oo imtixaanka ku galeysay dugsiga sare ee macalin Jaamac ee degmada xamar weyne ayaa sida la sheegay ka soo habsaamay waqtigii rasmiga ahaa ee uu imtixaanku billaabanayey, taasoo keentay in loo diido in ay galaan gudaha iskuulka.
Intaas kadib ardayda ayaa isku dayey in ay xoog ku galaan iskuulka si ay imtixaanka ugu fariistaan, waana tan soo de-dejisay isku dhaca dhexmaray ardayda iyo ciidamadii amniga sugeyey, kuwaaso ugu danbeyntiina furay rasaasta ay dhaawacmeen 3- ardayd.
Ardayda dhaawaca ayaa iminka lagu dabiibayaa qaar ka mid ah xarrumaha caafimaadka ee ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho, waxaana arrintan si aad ah uga cabanaya waalidiinta ardaydaasi.
Af-hayeenka ciidanka booliska oo aan dhinca kale qadka taleefanka kula xariirnay si uu ugu jawaabo arrintan iyo qaabka ay wax u dhaceen ayaa sheegay in xilligan aanu fasax u heysan inuu dhacdadaasi kala hadlo saxaafada.
Sidoo kale Masuuliyiinta wasaarada waxbarashada oo iyagu imtixaankan qaadayey ayey inoo suura gali weysay inaan qadka taleefanka ku helno.